अन्तर्राष्टिय Archives - E mechi
नेपालमा भूकम्प आउनुअघि भारतमा ६.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, ११ जनाले ज्यान गुमाए !
Posted in अन्तर्राष्टिय
नेपालमा बुधबार बिहान भूकम्प जानुभन्दा अगाडी भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बुधबार बिहान ६.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । अमेरिकी जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु राजधानी इटानगरभन्दा १८० किलोमिर दक्षिणपश्चिममा रहेको थियो ।स्थानीय समयअनुसार बिहान १ बजेर ४५ मिनेट जाँदा त्यहाँ भूकमप गएको हो ।चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार भूकम्पको धक्का तिब्बतसम्म महसुस भएको थियो ।भूकम्पको क्षतिबारे विवरण प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै फिलिपिन्सको प्रमुख टापु लुजोनमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । उक्त भूकम्पमा परी कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएको छ।फिलिपिन्सको भूकम्पमापन केन्द्रका अनुसार स्थानीय समय दिउँसो ५ बजेर ११ मिनेटमा ६.१ म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो।
भारतीय नेताद्वारा नेपालको अपमान (भिडियो सहित)
भारतीय कांग्रेस आईका नेता हार्दिक पटेलले नेपाल र नेपालीबारे अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेता पटेलले चौकीदार चाहिए नेपाल गएर ल्याउँछु भनेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, 'मलाई चौकीदार खोज्नुपरे म नेपाल जान्छु, तर मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ ।' भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई भारतको चौकीदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै चुनावी अभियामा लागेको सन्दर्भमा भारतीय पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पटेलले यस्तो बताएका हुन् । यसअघि पनि दिल्ली विधानसभाकी सदस्य अल्का लम्बाले नेपालबारे अपमानजनक टिप्पणी गरेकी थिइन् । आम आद्मी पार्टीकी विधायक लम्बाले लोकसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा ट्विटमा यसपटक प्रधानमन्त्री चुन्न आग्रह गर्दै चौकीदार नेपालबाट पनि मगाउन सकिने र नेपाली चौकीदार चोर नहुने उल्लेख गरेकी थिइन् । हेर्नुहोस् पटेलको अभिव्यक्ति भिडियोमा :
गयो शक्तिशाली भूकम्प , मृतकको संख्या ११ पुग्यो, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने
मनिला – मध्य फिलिपिन्सको समार प्रान्तमा मङ्गलबार मध्याह्न पुनः ६.२ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको फिलिपिन्स भौगर्भिक केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्र पूर्वी समार प्रान्तको सान जुलियानबाट करिब १९ किलोमिटर उत्तरतर्फ जमिनको सतहबाट करिब १७ किलोमिटर मुनि रहेको केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको धक्का फिलिपिन्सको राजधानी मनिलासहित मध्य फिलिपिन्सका धेरै प्रान्तमा अनुभव गरिएको थियो । उक्त भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन ।यसैबीच, सोमबारको भूकम्पबाट मारिने व्यक्तिको संख्या ११ पुग्नुका साथै २४ जना हराइरहेको फिलिपिनी अधिकारीहरुले बताएका छन् । निकै ठूलो जनधनको क्षति गरेको उक्त भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षति अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ । राजधानी मनिलाको उत्तरी प्रान्त पाम्पान्गाको पोराक शहरमा भवनहरु र अरु संरचना भत्किएका छन् । उक्त शहरमा सुरक्षाकर्मी एवं स्थानीय व्यक्तिहरुले र
Posted in अन्तर्राष्टिय, मनोरंजन
एजेन्सी । चर्चित पोर्नस्टार मिया खलीफाले आफ्नो प्रेमी रोवर्ट स्याण्डवर्गसँग लगनगाँठो कसेको खबर समाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी छिन् । उनको यो घोषणाले उनका धेरै प्रशंसकहरु अचम्मितमा परेका छन् । धेरैले मियाले विवाह गर्ने घोषणा गरेकी व्यक्तिबारे जिज्ञासा राखिरहेका छन् । मियासँग विवाह गर्न लागेका रोवर्ट पेसाले सेफ हुन् । रोवर्टलाई सानैदेखि खाना बनाउने रुची थियो । उनको समाजिक सञ्जालमा खाना पकाइरहेका कयैन तस्बिरहरु देख्न सकिन्छ । रोवर्टको खाना पकाउने सीपको लागि पुरस्कार पनि पाएको बताइन्छ । रोवर्ट र मिया लामो समयदेखि डेट गरिरहेका थिए । दुवैले एकअर्कालाई स्वीकार गरेको बताएका छन् । दुवैले समाजिक सञ्जालमा एक अर्कासँग आत्मिय रुपले खिचाएका तस्विरहरु पोस्ट गर्ने गर्छन् । रोवर्टले समाजिक सञ्जालमा सिकागोमा डिनरमा गएको बेला मियालाई विवाहको प्रस्ताव राखेको लेखेका छन् । मिया लेबनानमा जन्मिएकी अरबी
चर्चित ‘कामसूत्र थ्रिडी’की अभिनेत्री सयरा खानको निधन
विवादित फिल्म ‘कामसूत्र थ्रिडी’की अभिनेत्री सयरा खानको निधन भएको छ। उनको शुक्रबार बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको आईबी टाइम्सले जनाएको छ। ‘कामसूत्र थ्रिडी’ मा सायराले चर्चित अभिनेत्री शर्लिन चोपडाको स्थान लिएकी थिइन्। फिल्म रिलिजका क्रममा शर्लिनलाई लिएर ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। सायराको निधनलाई लिएर फिल्मका निर्माता रुपेश पालले दुःख व्यक्त गरेका छन्। एक अन्तर्वातामा उनले भनेका छन्, ‘मलाई यस कुराको कुनै अपेक्षा थिएन।’ उनले शर्लिनको स्थान लिनका लागि सायराले एकदमै अफ्यारोको सामना गर्नुपरेको बताए। उनले मुस्लिम परिावरबाट आएकी सायरालाई फिल्ममा लिनका लागि आफूहरुले पनि ठूलो चुनौती मलेको बताएका छन्। उनले सायराले निभाएको भूमिकालाई लिएर प्रशंसा समेत गरेका छन्।सायराको आत्म शान्तिको कामना गर्दै निर्माता रुपेशले उनको निधनमा कसैले पनि शोक व्यक्ति नगरेको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन्।
जापानका मानिस हरु किन यति धेरै फिट देखिन्छन ? ( यस्तो रहेछ उनीहरुको रहस्य ) जानी राखौं
प्रत्येक देशले संसारलाई केही चीज वा यसको संस्कृतिको माध्यमबाट सिकाउँछ। के तपाईंलाई थाहा छ किन जापानी केटीहरु बुढी देखिदैनन ? जापानी मानिसहरू फिट हुन्छन र धेरै सक्रिय देखिन्छन। आउनुहोस जानौं उनीहरूको जीवनशैलीको बारेमा जो उनीहरुले दैनिक दिनचर्यामा के गर्दछन र उनीहरूसधै स्वस्थ देखिन्छन । ग्रीन टि ग्रीन टि मा एन्टिओक्सिडेंट समावेश हुने गर्दछ जसले गर्दा छालाचौरी पर्दैन। दैनिक पिउने गरे वजन पनि कम हुन्छ र यसले क्यान्सर र हृदय रोगबाट पनि बचाउँछ । जापानी व्यक्तिले दैनिक कम्तिमा १-२ कप ग्रीन टि पिउने गर्दछन् । सी- फुड जापानी हरुले कुखुरा,खसी बंगुर आदि को मासु भन्दा सी- फुड ( समुन्द्री) बढी खाने गर्द छन् । रातो मासुको बढी सेबन ले, कोलेस्ट्रॉल र मोतापा बढ्छ । तर सैल्मन, ट्यूना माछा, झिंगा माछा आदि मा प्रोटीन र ओमेगा3फ्याटी एसिड बढी मात्रामा भेटिन्छ जसले गर्दा उनीहरु सधै फ्रेश देखिन्छन ।
जापानको एक अस्पतालमा गएको अक्टोबरमा जन्मिएको विश्वकै सबैभन्दा कम तौलको बालकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न लागिएको जापानी चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ती बालक जन्मँदा २२ सेन्टिमिटर अग्ला अर्थात् स्याउको आकारका थिए । रिउसुके सेकिया नाम राखिएका ती बालककी आमा तोशिकामा उच्च रक्तचापकी बिरामी थिइन् । चिकित्सकहरुले तोशिकाको २४ हप्ता पाँच दिनको गर्भबाट सफलतापूर्वक सिजेरियन गरी ती बालकलाई जन्म दिएका थिए । गएकाे अक्टोबर १, २०१८ का दिन जन्मेका ती बालकको तौल जन्मँदा २५८ ग्राम मात्र थियो । जापानमा यो दोस्रो अनौठो घटना हो । यसअघि अघिल्लो वर्ष जापानमै जन्मिएका अर्का एक बालकको तौल २६८ ग्राम थियो । ती बालकलाई यही वर्षकाे फेब्रुअरीमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । अस्पतालको आईसीयूमा सात महिना राखेपछि रियुसुकेको तौल १३ गुणा बढेको थियो । अहिले ती बालकको तौल ३ किलोग्रामभन्दा बढी भइसकेको छ । ती
एक भारतीय मतदाताले झुक्किएर गलत राजनीतिक पार्टीलाई मत दिएपछि आफ्नो बायाँ हातको चोरी औँला काटेका छन् । बहुजन समाज पार्टीका समर्थक बताउने पवन कुमारले हतारमा गल्तीले भारतीय जनता पार्टीलाई भोट दिन पुगेपछि आफ्नाै औँला नै काटेका छन् । ती युवकले गलत पार्टीलाई भोट दिएको कारण अफशाेच जनाउँदै हातको औंला काटेको बताएका छन् । औंला काट्ने बित्तिकै ती युवकलाई अस्पताल लगिएको थियो र उपचारपछि उनलाई घर पठाइएको छ । उत्तर प्रदेशकाे बुलन्दशहरकाे कोतवाली क्षेत्रको अब्दुल्लापुर हुलासन निवासी २४ वर्षीय पवन बिहीबार मत खसाल्न गाउँकै मतदान केन्द्रमा गएका थिए । मतदानको क्रममा हतारिँदै उनले बहुजन समाज पार्टीको चिन्ह हात्तीको सट्टा भारतीय जनता पार्टीको चिन्ह कमलको बटन दबाएका थिए । ती युवकले गलत पार्टीलाई मत दिए पछि आत्मग्लानी भएको बताए । त्यसपछि रिसले चुर भएको ती युवाले घरमा गएर बायाँ हातको चोरी औंला काटेका हुन्
विश्वकै धनी व्यक्ति बिल गेट्सकी छोरीको यस्तो छ लाइफस्टाइल
विश्वकै धनी व्यक्ति हुन् विल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिण्डा हुन् । तर यो जोडीले आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी लाइ प्राइभेट नै राखेका छन् । उनकी छोरी जेनीफर गेट्स अहिले २१ वर्षकी भइन् । उनी आफ्नो परिवारको ठ्याक्कै उल्टो छिन् । जो आफू घुमफिर गर्न सारै सोखिन कि छन् र आफ्ना फोटोहरू सोसल मिडियाहरूमा जमेर सेयर गर्छिन् । गएको वर्ष उनले आफ्नो ब्वाइफ्रेण्ड सँग कुवेत सहितका अन्य अलग अलग देशरूमा समय बिताइन । यसै दौउरानमा उनले संसारभरका घोड सवारी प्रतियोगितामा समेत भाग लिएकी थिइन् र त्यसका फोटोहरू सेयर पनि गरिन् । अप्रिल १९९६ मा जन्मिएकी जेनिफर बिल र मेलिण्डाका सबैभन्दा जेठी छोरी हुन् । उनका पिता जो माइक्रोसफ्टका कारण संसारभर प्रसिद्ध छन् । तर, जेनिफरलाई १४ वर्षसम्म फोन बोक्न दिइएको थिएन् । जेनिफर र उनका भाइबहिनीले आफ्ना पिताको सिएटलमा रहेको प्राइभेट लेक हाइस्कुलबाट पढाइ सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरु उच्च
काठमाडौं । केन्या प्रहरीले एक नाइट क्लबमा छापा मारेर १२ नेपाली महिलालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई मानव तस्करी गरेर त्यहाँ पु¥याइएको अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । केन्याको मोम्बासा काउन्टीको नियालीमा रहेको न्यू रंगिला बारमा प्रहरीले शनिबार विहान छापा मारेको थियो । त्यसक्रमा प्रहरीले क्लब मालिक आसिफ अलिराली इलिभाइ जेजेठासँगै १२ नेपाली महिलालाई पक्राउ गरेको छ । उनीसँग क्यानेडाको पासपोर्ट भेटिएको छ । प्रहरीले छापा मार्दा महिलाहरुले मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेको भेटिएको मोम्बासाका डेपुटी पुलिस कमाण्डेन्ट जोसेपले स्थानीय ‘एनटीभी’लाई बताएका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई लुंगालुंगा सीमाबाट पछ्याएको थियो । तर, कसरी सफल रुपमा केन्या प्रवेश गरे भन्ने आश्र्चयको विषय रहेको प्रहरीले बताएको छ । केन्या प्रहरीले यौन व्यवसायका लागि मानव तस्करीविरुद्ध कडाइ गरेको छ ।